दैनिक दिसा लाग्दैन ? अब नआत्तिनुहोस् यस्ता छन् घरेलु उपाय ! शेयर गरि सबैलाई जानकारी गरौ !! – ताजा समाचार
दैनिक दिसा लाग्दैन ? अब नआत्तिनुहोस् यस्ता छन् घरेलु उपाय ! शेयर गरि सबैलाई जानकारी गरौ !!
भनिन्छ, पेट सफा छ वा शरीरमा कुनै पनि किसिमको ख’राबीपना हुदैन् र अन्य रो’गले हामीले सताउँदैन् । पेटमा ख’राबीपना देखापरेमा सुरुको अवस्थामा नियमित रुपमा दिसा नलाग्ने, एकदमै कम दिसा पटकपटक लागिरहने, पेट फु’लेको वा ड’म्म भएको फिल हुने , खाना खाँदा पनि नखाँदा पनि पेटभारी हुने, काम प्रति जोश जागर नआउने, थ’काई लाग्ने जस्ता सम’स्या देखापर्दछ ।
यस्ता सम’स्यालाई आमले सामान्य सम’स्या भनेर वास्ता गदैनन्, यसरी वास्था नगर्नु भनेको रो’गलाई निम्तो दिनु भएकाले सम’स्याको समधान तर्फ अघि बढ्नुपर्दछ । पेटमा देखापर्ने सम’स्यालाई वास्था नगर्दा बि’रामी बेडमै थ’लापला पर्दछन् ।
पेटमा ख’राबीपना भएमा ग्या’स्ट्रिक, क’ब्जियत, अ’ल्सर लगायतका अन्य रो’गले समाउँछ ।
सबैको चाहना सुन्दर बनौं भन्ने हुन्छ । सुन्दर रहनको लागी पनि पेटको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । पेटमा फोहोर वा ख’राबीपना छ भने त्वचामा पनि र कपालमा स’मस्या सिर्जना जस्तै त्वचामा का’लो दा’ग ध’ब्बा, कपाल झ’रेर पातलो हुने, कपाल वा अनुहार रु’खो देखिने आदि ।